အထောက်အထားမဲ့ မွတ်ဆလင် ၉၆ ယောက်ကို ချောင်းသာမှာ ဖမ်းဆီး
အထောက်အထားမဲ့ မွတ်ဆလင် ၉၆ ယောက်ကို ချောင်းသာမှာ ဖမ...
30 พ.ย. 2562 - 00:18 น.
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နယ် ချောင်းသာမြို့နားမှာ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် မနက် အစောပိုင်းက အထောက် အထားမဲ့ မွတ်ဆလင် ၉၆ ယောက်ကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက သိရပါတယ်။
ချောင်းသာမြို့ ကန်ကြီးထောင့် ကျေးရွာအုပ်စုထဲက ဥတိုကျေးရွာအနီးမှာ သူတို့ကို လုံခြုံရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေက တွေ့ရှိပြီးနောက် ရဲစခန်းမှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းရွှေက ပြောပါတယ်။
"ချောင်းသာမြို့ ကန်ကြီးအုပ်စု ဥတိုကျေးရွာ တံတားနားမှာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့က မိတာ။ တချို့က မော်တော်ယာဉ်ပေါ်က မိတယ်။ တချို့ လှေပေါ်က မိတယ်" လို့ ပြောပါတယ်။
မိန်ကလေး တစ်ဦး နဲ့ ယောကျာ်းလေး တစ်ဦး အပါအဝင် အမျိုးသား ၃၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၆၃ ဦး စုစုပေါင်း ၉၆ ဦးကို ဖမ်းမိတယ်လို့ ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းရွှေက ပြောပါတယ်။
ဒီဖမ်းဆီးမှုမှာ သူတို့အပြင် ယာဉ်မောင်း သုံးယောက်၊ ယာဉ်နောက်လိုက် သုံးယောက် နဲ့ လှေလုပ်သား ခြောက်ယောက်ကိုလည်း ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီဖမ်းဆီးမှုမတိုင်ခင် စက်တင်ဘာလတုန်းကလည်း ဧရာဝတီတိုင်းထဲက ငရုတ်ကောင်းမြို့နယ်ထဲမှာ အထောက်အထားမဲ့ ရောက်လာတဲ့ မွတ်ဆလင် ၃၀ကျော်ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပြီး လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေနဲ့ အရေးယူ ထောင်ချခဲ့ပါတယ်။
လက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိစစ်နေဆဲ ဖြစ်တယ်လို့ ဒုရဲမှူးကြီး ထွန်းရွှေက ပြောပါတယ်။
"အခုကတော့ စစ်ဆေးတုန်းပဲ။ ဘာမှန်း မသိသေးဘူး။ ရခိုင်ဘက်က ဖြစ်ဖို့များတယ်။ သူတို့တွေက နယ်မြေကျော်ပြီး သွားလာခွင့်မရှိဘူး" လို့ ပြောပါတယ်။
အခုထိန်းသိမ်းထားသူတွေ ဘယ်ကလာသလဲဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် စက်တင်ဘာလတုန်းက တွေ့ခဲ့သူတွေကတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့ကနေ စက်လှေတွေနဲ့ အခကြေးငွေပေးပြီး လာခဲ့ကြတာလို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေအရ သိရပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တချို့ဟာ ရခိုင်ကနေ ရေလမ်းကတဆင့် ဧရာဝတီတိုင်းဘက်ကို ဝင်ပြီး အဲဒီကတဆင့် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းကတဆင့် မလေးရှားနိုင်ငံကို သွားဖို့ ရည်ရွယ်ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်း စစ်တွေမြို့ နာဇီရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင် ၁၀၀ ကျော်ဟာ လှေနဲ့ ထွက်လာပြီး ကျောက်တန်းမြို့နယ်ကို ရောက်လာတဲ့အတွက် တပ်မတော်ရေယာဉ်နဲ့ ရခိုင်ကို ပြန်ပို့ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်စဉ် ဖြစ်ခဲ့စဉ်က ဒုက္ခသည်စခန်းမှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင် လူငယ်တစ်ဦးကို ဘီဘီစီက ဆက်သွယ် မေးမြန်းစဉ်က သူတို့အနေနဲ့ ဒီလို ရခိုင်ကနေ ထွက်ခွာဖို့ရာ လူတစ်ဦးအတွက် အနည်းဆုံး ကျပ် သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင်ထိ ကုန်ကျလေ့ရှိတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ အထောက်အထားမဲ့ မွတ်ဆလင် ၉၆ ယောက်ကို ချောင်းသာမှာ ဖမ်းဆီး